Shirkii ka socday Nairobi oo Qodobo laga soo saaray. – SBC
Shirkii ka socday Nairobi oo Qodobo laga soo saaray.
Shir labo maalmood socday oo ay soo qabanqaabisay Qaramada Midoobay ayaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Nairobi.
Shirkaan oo loo diiday Warbaahinta ayaa qaatay muddo dheer kadib markii la isku mari waayay qodobada qaar iyo qaabka loo soo saarayo go’aamada.
Warar hoose oo ay Hiiraan Online heshay ayaa sheegaya in wakiilkii Dawladda Maraykanka u fadhiyay Shirka uu isaga baxay goobtii uu shirku ka socday taasoo dadka qaar ay u fasireen in aysan Dawladda Maraykanku raali ka ahayn qodobada shirka laga soo saaray.
Shirkan oo ay kasoo qayb galeen Madaxweynaha Dawlad Goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland Cabdiraxmaan maxamed (Faroole), Madaxweynaha Maamul Goboleedka Galmudug Maxamed Axmed Caalin iyo Gudoomiyaha Baarlamaanka DFKG Shariif Xassan Shiekh Aadan oo ay weheliyaan xildhibaano dawladda ka tirsan ayaa qodobadii laga soo saaray waxaa ugu muhiimsanaa:
1-In lasoo afjaro muddada dawlada KMG ah , lana doorto Madaxweyne cusub iyo Gudoomiye Baarlamaan.
2- In muddo 2 sano ah loogu daro wakhtiga Baarlamaanka DKMG ee Soomaaliya.
3-Shirka ayaa lagu sheegay inuu yahay Nidaam cusub oo hadda bilowday.
Waxyaabaha shirka kasoo baxay ayaa la gaarsiin doonaa Madaxweynaha iyo Golaha Wasiirrada DKMG ee Soomaaliya sida ku xusan War saxaafadeedka.
Shirka maanta lasoo gabagabeeyay ayaa ah mid ay qaadacday DKMG ee Soomaaliya oo ku tilmaantay inuu yahay shirqool iyadoo sidoo kalana aysan kasoo qayb galin Maamullada SomaliLand iyo Ximin iyo Xeeb oo shirka lagu martiqaaday.
Apriil 15, 2011 at 12:45 pm
Apriil 15, 2011 at 5:34 pm
adigu maxaad aheyd